Nyochaa 🥇eToro: Ego Platform, Mgbasa, Akụ Ahịa, na Iwu 2021``
Nyocha eToro: Ego Platform, Spgbasa, Akụ Ahịa, na Iwu 2021`
Ọdịnaya emetụtaghị ndị ọrụ US.
eToro Nyocha, ị bụ onye ọchụnta ego ọhụụ nwere mmasị ịzụrụ ebuka na mbak? Ma ọ bụ ma eleghị anya ị na-abanyekwu na Forex ma ọ bụ Bitcoin? Kedu ụzọ ọ bụla, ị nwere ike ịnwale ikpo okwu eToro.
Onye na-ere ahịa na-elekọta mmadụ na weebụ na-eji oké ifufe na-ewere ụwa ahịa. Site na ndị ọrụ karịrị nde 12, eToro na-adọrọ mmasị ịzụ ahịa ọhụrụ n'ihi eziokwu na ọ dị oke mfe iji. N’ezie, site n’itinye naanị nkeji iri nke oge gị, ị nwere ike ịnwe ego ejiri ego ma zụta nke mbụ gị!
Tupu ịmalite, anyị ga-ekpuchi ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ihe niile eToro. Nke a gụnyere otu ikpo okwu si arụ ọrụ, kedu akụ ị nwere ike ịzụta na azụmaahịa, ụgwọ na ụgwọ, ụkpụrụ, na ọtụtụ ndị ọzọ.
Olile anya na iji ihe omuma a nile bara uru g’enyere gi aka ime nkpebi ma obu eToro bu onye ahia gi kwesiri!
Naanị ezigbo cryptos dị na US
Gịnị bụ eToro?
EToro bụ ụlọ ọrụ na-ere ihe na weebụ bụ nke izizi hiwere na 2006. Ikpo okwu na-enyere gị aka ịzụ ahịa CFDs (nkwekọrịta maka ọdịiche), yana ụzọ esi azụkarị akụ.
Na ngalaba CFDs, eToro na-akwado ihe niile site na indices, agbụ, ebuka, ike na ọla - ịkpọ aha ole na ole. N'ụzọ dị oke mkpa, ị nwekwara ike 'zụta' cryptocurrencies, mbak na ETF n'echiche ọdịnala - nke pụtara na ị jigidere ikike zuru oke nke a na-ekwu.
Nhazi onu ahia ya - nke ka nke share na-emekọ ụgwọ, bụ otu n'ime ihe ndị mara mma gbasara eToro. Dịka ọmụmaatụ, a pụrụ ịzụta ebuka na ntọala enweghị ụgwọ ọrụ.
eToro bu ezigbo ihe ahia nke eji eme ihe nye ndi oru ohuru nwere ike ghara ibuta ahia. Dika odi, mt na-ukwuu tụrụ aro maka beginners ruru ya mfe ma dị irè interface. Ọ na - ewe ihe ole na ole iji debanye aha, tinye ego na akaụntụ gị, họrọ ụfọdụ mbak ịzụta, nke ahụ bụ maka ya, ị na - azụ ahịa!
Na ore ahia bụ ụlọ nke ọtụtụ ndị ọzọ na-achọpụta ihe ọhụrụ ndị na-apụta site na ìgwè mmadụ ahụ. Dịka ọmụmaatụ, eToro na-akwado ma ahịa mmekọrịta mmadụ na ibe ya ma na-edepụta ngwa ahịa azụmaahịa. Nke a na - enye gị ohere ka gị na ndị ahịa ndị ọzọ na-emekọrịta ihe 'na-akpakọrịta' - na -ekere ma na-atụle atụmatụ itinye ego maka ụzọ. Mpempe akwụkwọ azụmahịa nke eToro na-enye gị ohere ịhọrọ onye na-etinye ego na oge na-amasị gị n'anya, wee gosipụta pọtụfoliyo ha dị ka-maka-dị ka.
Kedu ofdị Ahịa m nwere ike ịzụta?
Ekwesiri ikwu na eToro bu ikpo okwu nwere otutu ihe. Site na nke a, anyị na-ekwu na ọ depụtara ọtụtụ klaasị akụnụba - ma n'ụdị CFDs na nke ọdịnala ọdịnala. Ka o sina dị, na usoro nke ebuka enye, ị ga-enwe ihe karịrị 800 mbak ịhọrọ site na.
Nke a sitere na ọtụtụ ahịa ahịa dị iche iche, yabụ ị nwere ọtụtụ ụzọ iji gbasaa n'ọtụtụ ahịa ahịa.
Maka ndị gị nwere mmasị itinye ego na ụlọ ọrụ UK dị ka RBS, British American Tobacco, ma ọ bụ AstraZeneca - ị nwere ike ịme nke a n'enweghị nsogbu na eToro.
Otu a ka ọ dị maka ebuka mba ofesi. Dị ka ndị dị otú a ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbasa pọtụfoliyo gị ọbụna n'ihu, mgbe ahụ ị nwere ọtụtụ nhọrọ na mpaghara a. Dika mgbanwe ahia mba ofesi na-aga, n'elu ikpo okwu eToro ị nwere ike ịnweta ihe ndị a:
N'ihe banyere ụdị ebuka ngalaba ị nwere ike ịzụta, enwere nhọrọ sara mbara ịhọrọ. Naanị ụfọdụ ahịa dịịrị gị gụnyere na eToro gụnyere:
Aka nri na ihe onunu
Ahịa ere ahịa
Na nkenke, ihe ETF na-enye gị ohere itinye ego na otu akụ site na otu azụmaahịa. Nke a nwere ike ịbụ ọtụtụ mbak nke jikọtara na FTSE 100, ma ọ bụ nkata ebuka sitere na ngalaba teknụzụ. eToro na-akwado ihe karịrị 150 ETF sitere n'ọtụtụ dịgasị iche iche.
O doro anya ịhụ ihe kpatara ndị investors ji esoro ETF mgbe a bịara n'ịrụ ma na-agbasa pọtụfoliyo ha. Site na ntinye n'efu nke eToro na-enye, ọ bụ ụzọ kachasị mma iji nwee ike itinye ego na ọtụtụ akụ dị iche iche site na naanị otu itinye ego.
Nyere na ndị na-enye ETF na-azụ ma na-erere gị mbak maka, ntinye ego dị mfe na eToro bụ ihe niile achọrọ. Emechakwa, ịkwesighi ịme ihe ọ bụla ruo mgbe ịchọrọ itinye ego na ntinye ego.
Ọ bụrụ n ’ị na-achọ itinye ego kịrịkrịk gị na pọtụfoliyo gị na-ere ahịa mgbe ahụ ị nwere chi ọma, ebe eToro na-enye mkpụrụ ego dijitalụ 16.
N'ụzọ dị oke mkpa, eToro bụ otu n'ime ndị ndu ụwa na fintech (teknụzụ ego) kemgbe mmalite nke ngọngọ. Ọ baghị uru ma ọ bụrụ na ị bụ pro pro crypto ma ọ bụ na-eche echiche ịbanye n'ahịa maka oge mbụ - eToro na-eme ka usoro itinye ego dị mfe.
Ntinye ego nke Cryptocurrencies nwere nchekwa 100% na ikpo okwu eToro. N'elu nke a, ngalaba nke cryptocurrency biara na nnweta uzo di iche-iche nke ihe ndi mmadu na-acho. Nke a gụnyekwara njikwa ihe egwu akpaghị aka - ihe dị oke mkpa mgbe ị na-enweta cryptocurrencies.
Ego nke dị ugbu a iji nweta ma zụọ ahịa na eToro bụ ndị a:
Ọnụ ego Binance
Y’oburu na i choro izu ahia nkpuru obi gi ma jide ego ndia otutu aro. Agbanyeghị, ị ga-akwụ ụgwọ ma ọ bụrụ na ị kpebie iburu cryptocurrencies dị mkpụmkpụ ma ọ bụ tinye itinye ego. Crypto CFDs adịghị n'okpuru FCA.
Abịa na usoro nke mkpụmkpụ cryptocurrencies na eToro, ị nwere ike ime nke a site na ọnọdụ CFD. Agbanyeghi na inwere ihe nwere ike ime, ahia gi di iche na uzo nke iwu CFD ndi ozo.
Ọ bụrụ na ị kabeghị 100% ijide n'aka na ị nwere obi ike zuru oke na azụmaahịa na cryptocurrencies, ọ ga-ekwe omume idetu ahia. Nke a pụtara na ị nwere ike idetuo onye ahịa azụmaahịa nwere mmụọ dịka ihe na-adị. Na nke a, mkpebi ọ bụla onye na-ere ahia na-eme na-egosipụta (na oke) na pọtụfoli nkeonwe gị. Anyị ga-ekpuchikwu banyere ịzụ ahịa azụmaahịa ntakịrị oge ma emechaa.
N'ụzọ na-akpali mmasị, eToro malitere n'ezie dị ka ọkachamara Forex trading ikpo okwu ezubere maka newbies. Dị ka ndị dị otú a, ị ga-ahụ ọtụtụ nhọrọ nke ego na ikpo okwu - a ga-ere ha niile na ndabere 24/7.
Nke a gụnyere ọtụtụ ndị isi na ụmụaka, yana nhọrọ nke ụzọ abụọ. Mgbe ị na-ere ahịa iji eToro, ị kwesịrị ilekwasị anya na 'ndepụta' iji hụ ma nhọrọ ịhọrọ ego gị ọ na-agbada, ma ọ bụ na-azụ ahịa.
Ọ ga-abụ ihe amamihe dị na ya nyochaa nkwado na nkwụsi ike site na ilele akara ngosi Forex na-enye n'elu ikpo okwu. Ebumnuche bụ ịzụta mgbe nkwado na ịre tupu oge nkwụsị. Na-enyocha ụgwọ mgbe niile mgbe ị na-ere ahịa na eToro, n'ihi na nke a nwere ike ịdị iche dabere na ọnọdụ ahịa dị ugbu a.
Dịka anyị tụlere na mbụ, ị nwere ike ịchọta onye na-ere ahịa nnomi na eToro nke ngalaba ọrụ ya na-azụ ahịa na mgbanwe mba ofesi.
Onu ahia ahia obula n’uwa n’ile nwere otutu onu ogugu ma obu ihe edere - na ihe ngosi ndi a bu otu akuku nke ahia a.
Indices gụnyere ọnụọgụ dị iche iche dị iche iche, ọ bụ n'ihi na akụ ndị a na-edozi ibe ha nke ọma na a na-ahụta indices ka ọ dị ntakịrị karịa osisi ọ bụla. Dịka ọmụmaatụ, FTSE 100 na-eso 100 ụlọ ọrụ kachasị elu na London Stock Exchange.
Nyere na ụlọ ọrụ dị iche iche na-adịkarị iche ma a bịa n'ahịa ahịa na oke, ngwaahịa ọ bụla nwere mmetụta dị iche na ndeksi na ajụjụ. Dịka ọmụmaatụ, dịka Google nwere ọtụtụ ibu karịa obere ụlọ ọrụ dị na ndepụta ahụ, ọ bụrụ na ngwaahịa ya na-arị elu nke ukwuu, ọnụ ahịa zuru ezu nke ndeksi ahụ nwere ike ibili kwa, yana nke ọzọ.
N’okpuru, anyị edepụtala 5 nke indices ndị ama ama na eToro, ma ha bụ ndị a:
Na eToro, a na-ere indices dị ka CFDs. Ihe kpatara nke a bụ na ha abụghị akụ na ụba ma enweghị ike itinye ya na ya. Agbanyeghị, obere ọrụ na eToro bụ itinye ego na ETF nke na-agbaso ndeksi. N'ime nke a, ị ga - enweta oke mbak ma si otua - tozuru oke!
EToro Commission na esgwọ kọwara
Tupu ikwenye na onye ahia ahia ahia, odi nkpa ka inyocha ego ahia nke uzo ahia ma kesaa ebubo ndi ozo.
N'iburu nke a n'uche, anyị ejirila ọnụ ọgụgụ ego eToro kachasị ọnụ ahịa ị nwere ike izute.
Enweghị Kọmitii Na Ahịa Ahịa
Ikike ịzụ ahịa ebuka na-enweghị ebubo ọrụ ọ bụla bụ ihe na-eme ka eToro dị iche. Nke a bụ ikpe n'agbanyeghị ma ị na-etinye ego na UK ma ọ bụ na mba ụwa.
Ọ bụ ụdị mmesapụ aka a dọtara ihe karịrị mmadụ nde iri abụọ na itoolu n’elu ikpo okwu. A sị ka e kwuwe, ndị ọzọ na-ere ahịa enyi na enyi anaghị enyekarị ụdị ego ego a, ụfọdụ na-ejedebe dị ka 12-1% na azụmaahịa ọ bụla.
Ọ dị ezigbo mkpa ịmara na ị ga - agabiga ụgwọ ego ndị a na - eme ma ọ bụrụ na ị naghị ere, ma ghara itinye ntinye aka na ọnọdụ ahụ.
Y’oburu n’itinye ulo oru ma obu iburu ndi ahia ahia - ị na - emezi ihe CFD Ya mere, kama itinye ego na akụ a na-ekwu, ị bụ trading ya.
Ingghọta ihe mgbasa, nke bụ ihe dị iche n'etiti 'ere' na ọnụahịa 'ego' nke ihe dị mkpa, dị mkpa. Nke a bụ otu n'ime ego ahụ iji tụlee dị ka akụkụ nke 'nloghachi na itinye ego' (ROI).
N'ihe gbasara mgbasa na-aga na eToro, ha ga-agbanwe dịka ọnọdụ ahịa n'oge ahụ si dị. Yabụ na nke a, ọ nweghị usoro ọ bụla ebe. Site na nke a, eToro na-asọ asọmpi na ngalaba mgbasa - ọkachasị na klaasị akụ dị ka ebuka, ọla edo na indices.
Ga-enwe ike iji mgbasa ozi kachasị asọmpi site na ịzụ ahịa n'ime oge mmeghe ahịa.
Kwụ ụgwọ / nkwụnye ego
Agbanyeghị na enweghị ego nkwụnye ego gọọmentị, ịkwesịrị ịtụle ego ntụgharị ego. Ihe kpatara nke a bụ na akaụntụ gị na eToro ga-egosi na dollar US.
Mgbe ị tinyere n'ime akaụntụ eToro (site na iji usoro ịkwụ ụgwọ ị họọrọ) a ga-enwe obere ụgwọ nke 0.5% na ego ahụ. Yabụ, ka anyị kwuo na itinyela ego £ 1,500. Nke a ga - efu gị £ 7.50 (0.5% nke £ 1,500).
Abia na iweputa ego gi, onwere ego pere mpe nke $ 5, nke ahu diri ugbua ihe ruru £ 3.99.
EToro Platform - Ahịa
Mgbe ọ bịara n'ịzụ na ire ahịa gị na mbak, eToro na-eme ka usoro ahụ dịrị gị mfe.
Inwe ike ịchọta otu itinye ego enwere naanị nhọrọ abụọ ịhọrọ.
Jiri nzacha dị na ụlọ akwụkwọ ngwaahịa eToro site na imechi ọchụchọ na ngalaba ma ọ bụ mgbanwe nke ụlọ ọrụ ahụ.
Gaa ozugbo na isi site na itinye aha ụlọ ọrụ akọwapụtara na igbe ọchụchọ.
Iwu ahia dị
N'agbanyeghị na eToro na-eche maka ndị na-etinye ego ọhụrụ, a ka nwere ọtụtụ iwu ga-adị maka gị ka azụmaahịa na-aga.
N'okpuru ebe anyị edepụtara iwu ahịa 5 ị ga-enwe ike iji mgbe ị na-ere ahịa na eToro.:
eToro na - enye gị ohere ịzụta ngwaahịa na ọnụahịa akọwapụtara ma debe 'oke ịgba'. Ọ bụrụ na enwetaghị ihe a na-akpọ ego na-akpalite ahịa ahụ ga-enwe ọnọdụ 'na-echere' ruo mgbe ọ ga-akagbu (nke gị). Ọ bụrụ na ndị price zutere mgbe gị iji ga-gburu.
Site n'usoro ahịa, ị nwere ike 'itinye' ahia ahụ na ọnụahịa kacha dị nso. Na mpụga oge azụmaahịa ọkọlọtọ, a ga-eme iwu gị ozugbo ọnwere ahịa ma ọ bụ ahịa ahịa dabara.
Ọ bụrụ na ị na-ele anya ịzụrụ na ire mbak na ọ ga-abụ nke obere oge, iwu nkwụsị ga-adabara gị n'ụdị ịzụ ahịa gị. Nwere ike ịhọrọ imechi azụmahịa gị ozugbo ego ahụ dara site na ọnụọgụ ego., A ga-eme ihe a niile na akpaghị aka na ego a kara aka.
Dika nke a nyere gi aka imechi ahia ozigbo emezuru ihe ezubere tupu emee, iwu nturu ego bara uru karia nke ndi ahia. Ọzọkwa, a ga-eme nke a na akpaghị aka.
Ọ bụrụ na ị na-eche maka ijide mbak na eToro ruo ọtụtụ afọ, ị nwere ike ị jiri naanị ahịa iji nweta ọrụ ahụ.
Zụ ahịa Social na Detuo ahia
Enwere ike ịgbaghara gị maka iche n'echiche na eToro bụ naanị ahịa azụmaahịa. Mana, eziokwu bu, o nwere otutu ihe inye.
Nke a na-ewetara anyị echiche ọgụgụ isi nke ịzụ ahịa oyiri. N'ikwu ya n'ụzọ dị mfe, yana iji eToro maka akụkọ ọhụụ niile, ndụmọdụ na trading azum - ị nwekwara ike ịlele mkpebi mkpebi nke ndị na-etinye ego n'oge na-enweghị nnukwu mbọ.
Could nwere ike ịsị na eToro bụ maka mmekọrịta mmadụ na ibe ya trading, ihe Facebook bụ na-elekọta mmadụ etiti. Ọ bụ maka ịkekọrịta echiche na echiche, mana maka ndị na-etinye ego na mbak. You nwere ike ịlele plethora nke nghọta ahịa na ọnọdụ ihu ọha na eToro, ọ na-ewu ewu karịa mgbe ọ bụla.
Iji nye gị ihe atụ, ka anyị kwuo na onye ahịa na-akwanyere ùgwù ma nwee ahụmịhe mara ọkwa ụfọdụ atụmatụ atụmatụ azụmaahịa na eToro. N'elu ikpo okwu a, ị nwere ike ịlele post nke onye ahịa ahụ, wee zaghachi ya dị ka ọnọdụ mgbasa ozi mmekọrịta.
Ọ bụrụ n ’ị bụ ntakịrị ihe ọhụụ mgbe a bịara n’itinye ego, nghọta a bara oke uru. N'ezie, ị nwere ike itinye onye ahịa ịchọrọ mmasị dị ka enyi (nke pụtara na ị 'na-eso' ha)
Social trading dị ukwuu ma na-ewu ewu maka ihe ndị a kpọtụrụ aha n'elu. Agbanyeghị, ekwesịrị ikwu na ịzụ ahịa azụmaahịa dị oke karịa azụmaahịa mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Ọ bụrụ na ịnụtụbeghị banyere ịzụ ahịa azụmaahịa, ụzọ kachasị mfe iji tinye ya bụ na ị nwere ike i copyomi mmegharị nke onye ọchụnta ego nwere ahụmahụ, dịka (ma ọ hà). Mgbe idetuo Pọtụfoliyo ahụ niile, ị na-ewukwasị ihe iche iche nke ebumnuche itinye ego gị, gụnyere itinye ego n'ọdịnihu.
Performancerụ ọrụ n’oge gara aga abụghị ihe na-egosi nsonaazụ ọdịnihu.
Echiche nke ịgbagharị na ịntanetị ọtụtụ awa ma ọ bụ ụbọchị na njedebe iji tụọ ihe ebuka na mbak ị kwesịrị itinye na ya nwere ike ịbụ atụmanya na-emenye ụjọ. Site na ahia ahia, ị na-echekwa onwe gị ọtụtụ nyocha, dịka onye ọkachamara ga-eme ihe ahụ niile tupu ịme mkpebi ọ bụla. Emechakwa, ọ bụ ego ndị ọchụnta ego na nsogbu.
Ọ bụrụhaala na itinye ego opekata mpe $ 200, ị nwere ike itinye ego dịka ịchọrọ. Nwere ike idetuo ihe karịrị otu eToro onye na-ere ahịa nnomi n'otu oge ma ọ bụrụ na ịchọrọ. Fọdụ ndị ahịa na-eme nke a iji belata ọgbụgba ahụ ma ọ bụrụ na onye ọchụnta ego mee mkpebi ọjọọ.
Nke a bụ ihe atụ dị mfe:
Ka anyị kwuo na ị detuo ahia nke nwere ebuka 25 dị iche iche, tinyere £ 200,000 etinye.
Site na ego a, onye ahịa ahụ nwere 10% na ebuka Twitter - nke ga-abụ £ 20,000.
Ugbu a, ka anyị kwuo na itinye ego naanị £ 2,000 n'ime pọtụfoliyo azụmaahịa oyiri
N'ihi na ihe niile ga-adịrị ka ihe kwesịrị ekwesị, ntinye 10% gị na Twitter ga-abụ £ 200
eToro anaghị akwụ ụgwọ ego maka iji njirimara azụmahịa oyiri. N’ezie, ị na-enwe ike ịhapụ ọnọdụ gị oge ọ bụla ịchọrọ n’enweghị nsogbu ọ bụla. N'elu nke ahụ, ị ​​nwere ikike zuru oke maka ego gị n'ihi na ị nwere ike iji aka gị kagbuo iwu dị iche iche n'onwe gị n'ime pọtụfoliyo gị.
Ebe eToro nwere ngwa ahịa ọkọlọtọ dị maka n'efu, enwere nhọrọ ndị ọzọ maka ikekwe ndị ahịa toro eto. Dị isi abụọ nke ngwa ahịa azụmaahịa dị elu dị na ikpo okwu eToro bụ 'pọtụfoliyo ahịa' na 'ọkwa azụmaahịa kachasị elu'.
Nke a bụ nkọwa dị mkpirikpi nke abụọ:
Pọtụfoliyo ahịa - onye oru ahia a bu ihe kwesiri ichikota nhoputa nke ihe omuma n’okpuru nche nke 1 ahia ahia.
Oke ahia ahia - ngwa ahia ahia a na-etinye ndi ahia kachasi elu na ikpo okwu eToro.
Abụọ ndị ọrụ ahia ahia a na-eji ahia algọridim na ọgụgụ isi, ha abụọ na-ejikwa nlezianya achịkwa. Iji jiri ndị ọrụ nnomi nnomi a, ịkwesịrị itinye $ 5,000 n'ime pọtụfoliyo gị, ma ọ dịkarịa ala.
Ngwa ahia ahia n'efu
Ọ bụrụ n’ịchọghị ilepụ anya gị n’olu bọọlụ ebe ị nọ na-azụ ahịa, mgbe ahụ ngwa ngwa eToro bụ ntakịrị ihe nzọpụta. Ọbụna nke ka mma, ọ bụ n'efu.
Ị nwere ike ịnweta free ahia ahia ngwa na gam akporo na iOS ngwaọrụ. Ọ bụrụ na ịnweghị ngwaọrụ nke dakọtara, ị ka nwere ike ịnweta eToro site na ihe nchọgharị weebụ gị na mkpanaka.
Site na iji ngwa - ị nwere ike ịzụta ma ọ bụ ree mbak na njem. lelee uru pọtụfoliyo gị na ọbụlagodi ma ọ bụ wepụ ego gị.
Nnyocha nyocha na eToro
eToro enweghị ọtụtụ nhọrọ maka gị dịka nyiwe ndị ọzọ ma a bịa nyocha na nyocha. You gaghị enwe ohere nyocha nyocha ọkachamara zuru oke, akụkọ nkwụnye ego ma ọ bụ akụkọ ọha.
Ọ bụghị mbibi na ọchịchịrị niile, ebe ọ bụ na e nwere eserese dị iche iche na eserese dị iche iche dabere na mmemme ọnụahịa akụkọ ihe mere eme - yana ọnọdụ izugbe nke na-eduga oke ego.
Ekwesịrị ịsị na eToro enweghị ike ịnye gị ozi dị mkpa, yabụ ikpo okwu a nwere oke na ndị ọrụ na -eweta akụkọ banyere onwe ha.
Mgbe ị tụlere ihe niile, enweghị ụgwọ ụgwọ ọrụ, yana ọtụtụ atụmatụ ndị ọzọ, mejupụtara adịghị ike na nyocha na nyocha. E kwuwerị, ọ dịghị ihe na-egbochi gị iche echiche na mpụga igbe ahụ ma nweta ozi a site na ebe ọzọ.
Anyị na-akwado isi mmalite dị ka Morningstar na Yahoo Finance.
Zọ ịkwụ ụgwọ na eToro
Ọ dị mfe itinye na eToro n'ihi na ha nwere nnukwu nhọrọ nke usoro ịkwụ ụgwọ akwadoro.
Na eToro, nke a gụnyere:
E-wallets dị ka Paypal, Skrill na Neteller
Ọ bụrụ n ’ị na-achọ ịzụta mbido ozugbo, nke a ga-eme ka itinye akaụntụ gị dị ka ikuku. Biko rịba ama na a na-edozi ọtụtụ nkwụnye ego ozugbo, mana ọ ga-adabere na usoro ịkwụ ụgwọ gị.
EToro Ọ̀ Bụ Ebe Nchebe?
N'ezie, otu n'ime ihe mbụ anyị na-eche maka mgbe ịbanye na ihe ọ bụla ọhụrụ bụ 'ego ole ka ọ ga-efu m?'. Otú ọ dị, na nke a, ọ dị oké mkpa ka mbụ lelee na ikpo okwu na-achịkwa ya nke ọma.
N'ezie, nke a na-eme ka obi sie gị ike na onye na-ere ahịa ị na-emeso dị n'elu bọọdụ ma ghara ịgba ọsọ na ego azụmaahịa gị siri ike.
Dika odi, eToro nwere ikikere ato ato, nke gunyere:
CySEC: Cyprus Securities na Exchange Commission
FCA: Njikwa Omume Ego
ASIC: Kọmitii Nchekwa Australia na Investments
Ndị ọchụnta ego UK niile dara n'okpuru FCA na eToro (UK) bụ onye otu FSCS.
N'ihi mmepe na-adịbeghị anya, ndị na-etinye ego na UK ugbu a maka ihe ọ bụla n'okpuru FSCS 85,000, ma na mbụ ọnụ ọgụgụ ahụ bụ £ 50,000. Nakwa iwu na ikikere ndị a dị oke mkpa, ị ga-enye otuto ebe akwụmụgwọ kwesịrị. Site na nke a, anyị na-ekwu na eToro adịla afọ 14 wee si otu a - ihe karịrị nde mmadụ iri na abụọ na-etinye ego na ya enweghị ike ịbụ ihe ọjọọ.
Edebere Cryptocurrencies na eToro?
Mba Ọ dị mkpa ịkọwa na na ọnọdụ nke cryptocurrencies kpọmkwem, enweghị ụkpụrụ ebe - ọbụlagodi UK. Nke a pụtara na mgbe ị nwere akụnụba na-akpata gị, atụmatụ ịkwụ ụgwọ UK anaghị mkpuchi gị.
Nke a pụtakwara na ọ bụrụ na ọrụ ahụ ejughị gị afọ maka ihe ọ bụla, ị nweghị ike itinye akwụkwọ mkpesa gị na Ọrụ Ombudsman Financial. Site na nke ahụ, nkwenye zuru oke bụ na eToro ga-agba mbọ idozi nsogbu ọ bụla ma ọ bụ zaa ajụjụ ọ bụla ị nwere - dịka ndị otu na-akwado ndị ahịa bụ ndị kachasị elu.
Nke a apụtaghị na ị gaghị enwe ihe nchebe ọ bụla n'agbanyeghị. Nke a bụ n'ihi na ahịa CFD cryptocurrency na eToro do -abịa na kwukwara uru nke nchedo usoro iwu. Nke a bụ n'ihi na a na-ahazi ngwa CFD iche na klaasị ndị ọzọ.
Ibido na eToro
Ọ bụrụ n ’ọ bụrụ ugbua ị na - eche akaụntụ eToro nwere ike ịbụ maka gị, mgbe ahụ anyị etinyela usoro ole na ole iji bido.
Kwụpụ 1: Imepe Akaụntụ
Iji malite, ị ga-aga gaa eToro weebụsaịtị ịbanye. Dịka ọ bụla ị na-emekọrịta (na-achịkwa) ị ga-abanye ụfọdụ nkọwa iji gwa ha onye ị bụ. Dịka, ịkwesịrị ịbanye:
Aha gị na aha ikpeazụ
Aha ojii (nke a ga-abụ ihe pụrụ iche)
Pụrụ iche paswọọdụ
Nọmba mkpuchi mba
Kwụ na Confkwụ 2: Gosi na ị bụ onye
Ọzọ, eToro ga-achọ ijide n'aka na ị bụ onye ị na-ekwu na ị bụ, iji gbochie izu ohi njirimara na egwu ndị ọzọ dị otú ahụ.
A ga - ajụ gị ugbu a ka ị bulite ụdị njirimara ole na ole ma ha ga - eso usoro ndị a:
Ihe nwere aha gị na adreesị ebe obibi gị - dịka nkwupụta ụlọ akụ ma ọ bụ ụgwọ ekwentị.
Nchịkwa gọọmentị - dịka paspọtụ gị ma ọ bụ akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala gị
N'ikwu okwu n'ozuzu, eToro ga - akwado akaụntụ ọhụrụ gị n'ime otu awa. Ọ bụrụ n ’ọ dị gị ka ọ na - ewe obere oge, kpọtụrụ ndị ọrụ na - ahụ maka ndị ahịa maka ndụmọdụ.
Akụkụ a dị mfe n'ihi na ohere dị - ị nwereworị echiche nke usoro ịkwụ ụgwọ ị chọrọ iji na akaụntụ eToro gị.
Ugbu a site na ndọpụta menu, họrọ usoro ịkwụ ụgwọ ị chọrọ iji. Mgbe ahụ, ị ​​nwere ike ịhọrọ ọnụọgụ ego ịchọrọ itinye na akaụntụ eToro gị.
Buru n'uche na nkwụnye ego kachasị mkpa bụ $ 200 (£ 160-ish n'oge edere), na dabere na usoro ịkwụ ụgwọ ego gị ga-abanye na akaụntụ gị ozugbo.
Biko mara na nnyefe ụlọ akụ nwere ike were ụbọchị ole na ole, yabụ ọ bụrụ n'ịchọrọ ịmalite ozugbo ị nwere ike ịhọrọ usoro ịkwụ ụgwọ ọzọ.
Kwụpụ 4: Zụta Shafọdụ Azụmaahịa
Yabụ, ugbu a inwere ego na akaụntụ eToro gị ị nwere ike zụrụ onwe gị ụfọdụ oke. Dị ka anyị kpuchie na mbụ, enwere ọtụtụ nzacha dị iche iche ị nwere ike iji n'oge a iji chekwaa gị oge dị ukwuu.
Yabụ, ọ bụrụ na ịmara ụlọ ọrụ ịchọrọ itinye ego na ya, ma ọ bụ nwee eburu n'uche, ị nwere ike nyochachaa nsonaazụ ọchụchọ ahụ n'ụzọ dị mfe. Ọ bụrụ na ịnweghị ihe akpọrọ aha n'uche mgbe ahụ ị nwere ike ịchọgharị na ọbá akwụkwọ eToro ma hụ ihe na-amasị gị.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ n'ịchọrọ ịzụta mbak, pịa 'ahịa ahịa' na mgbe ahụ 'ebuka'. Ozugbo ịchọtara ihe ịchọrọ ịzụrụ, ị nwere ike tinye ọnụego ịchọrọ itinye ego (na US dollars).
Pịa 'mepee ahia' iji mezue usoro ngwaahịa mgbe ahịa mepere. Ma ọ bụ, ọ bụrụ na emechiri ngwaahịa mgbanwe na ajụjụ n'oge ahụ, pịa 'usoro iji'.
Uru na ọghọm nke eToro
Atụmatụ pụrụ iche maka mmekọrịta mmadụ na ibe ya na oyiri
Nhọrọ nke ihe karịrị 800 mbak
Enweghị oke ụgwọ ebubo
Azụmaahịa CFD ma ọ bụ zụta mbak, ETFs, na mkpuchi
Ohere eji eme enyi
UK na inweta ahia ahia mba ofesi
Ọ bụghị ọtụtụ ụzọ nyocha na nyocha
Ego ntụgharị ego nke 0.5% mgbe ị na-etinye ego
Na ihe karịrị nde ndị ọrụ 12, o doro anya ịhụ ihe kpatara ndị na-etinye ego na-eji eToro iji bulie isi obodo ahia ha. Igwe eToro dị oke mfe, yabụ ọ dị mma maka ndị mbido. N’ike aka, ugwo a choputara nke ugwo oru na ebubo ndi ozo n’enye ndi mmadu ego.
Tinye na eziokwu ahụ bụ na ego a na-akwụ kwa afọ yana ọtụtụ ụzọ nkwụnye ụgwọ dị iche iche na-enye, eToro na-agbakwụnyekwa ndị na-etinye ego n'oge. eToro anaghị akwado itinye ego maka itinye ego, ebe ị nwekwara ike ire ere ma jiri ya nweta ihe.
Nakwa eziokwu ahụ nwere ihe karịrị 800 dị iche iche dị, enwere ihe maka onye ọ bụla ebe a. Nke a gụnyere ihe niile sitere na ngwaahịa na nkekọ CFD na Forex, indices na cryptocurrencies. Ọ bụrụgodi na ị chọghị ime mkpebi, ị gaghị enwe mkpirisi nhọrọ.
eToro bu otutu uzo di iche iche nke na enye ma itinye ego na nkpuru na cryptoassets, yana ahia CFDs.
Biko rịba ama na CFDs bụ ngwa mgbagwoju anya ma nwee nnukwu ihe ọghọm nke ịlafu ego ngwa ngwa n'ihi itinye ego. 75% nke akaụntụ ndị na-ere ahịa na-ere ahịa na-efufu ego mgbe ha na-azụ ndị CFD na onye na-eweta ọrụ a. Should kwesịrị ịtụle ma ị ghọtara otu CFDs si arụ ọrụ, yana ma ị ga - enwe ike ibute nnukwu nsogbu nke ịnwe ego gị.
Cryptoassets bụ akụrụngwa na-agbanwe agbanwe nke nwere ike ịgbanwe n'ọtụtụ ebe na obere oge ma yabụ na-ekwesịghị ekwesị maka ndị ọchụnta ego niile. Ndị ọzọ karịa site na CFDs, azụmaahịa cryptoassets anaghị achịkwa ma yabụ enweghị usoro iwu nchịkwa EU.
eToro USA LLC anaghị enye CFD ma ọ nweghị onye na-anọchite anya ya ma ọ nweghị ibu ibu maka izi ezi ma ọ bụ izu ezu nke ọdịnaya nke akwụkwọ a, nke onye ọlụlụ anyị kwadebere iji ozi ọha na eze na-abụghị nke ndị na-abụghị ndị kwadoro.
Ogologo oge gara aga ka eToro hiwere?
EToro hiwere na 2006 nwere ebumnuche iji belata ịdabere na ụlọ ọrụ ego na-eme ka ọ dị mfe ịnweta ọnụ ọgụgụ Joe.
Enwere ngwa mkpanaka maka eToro?
Eeh. Enwere ngwa ahia ahia eji eji ego enwere na gam akporo na iOS.
Enwere m ike ịnweta dividends na eToro
Eeh. Naanị ma ọ bụrụ na ịzụta ebuka ebuka. Mgbe a kwụrụ ụgwọ ahụ, òkè gị ga - egosipụta na akaụntụ eToro gị.
Emere eToro kpamkpam?
Eeh. eToro nwere ikikere 3 dị iche iche ma ha bụ CySEC, ASIC na FCA.
Enwere ego nkwụnye ego kacha nta na eToro?
Ee, enwere. Ọnụ ego kacha nta chọrọ bụ $ 200 (ihe dị ka £ 160 n'oge edere)